- နော်ဝေနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Tone Tinnes နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
Created By : 15-May-2018	Published In: နိုင်ငံတကာ အစည်းအဝေး Hits: 176
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည် ဦးဆောင်သောအဖွဲ့အား နော်ဝေနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Tone Tinnes ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ၁၅-၅-၂၀၁၈ ရက်နေ့ (၁၀:၀၀)နာရီမှ (၁၀:၅၀) နာရီထိ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံး၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခန်းတွင် လာရောက်ဂါရဝပြု တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
- UNDP မှ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ Dr. Stuart C.Gilman နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
Created By : 11-May-2018	Published In: နိုင်ငံတကာ အစည်းအဝေး Hits: 198
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဇော်ဝင်း ဦးဆောင်သော အဖွဲ့သည် UNDP မှ ကျွမ်းကျင်သူ Dr. Stuart C.Gilman ဦးဆောင်သော အဖွဲ့အား ၁၂-၄-၂၀၁၈ ရက်နေ့ တွင် ၁၀:၀၀ နာရီမှ ၁၀:၂၀နာရီထိ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်ရုံး၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ခန်းတွင် လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
- မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂရုံး(UNODC) မှ Anti-Corruption and Law Enforcement International Expert Mr. Raghavan Kuppuswamy နှင့် Ms. Marie Pegie Couchois တို့အား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
Created By : 26-Apr-2018	Published In: နိုင်ငံတကာ အစည်းအဝေး Hits: 303
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူး ဦးစန်းဝင်းသည် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂရုံး (UNODC) မှ Anti-Corruption and Law Enforcement International Expert Mr. K. Raghavan နှင့် Ms. Marie Pegie Couchois တို့အား ၂၅-၄-၂၀၁၈ ရက်နေ့ ၁၅:၀၀ နာရီမှ ၁၆:၃၀ နာရီထိ ကော်မရှင်ရုံး၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
- အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကြည်က ဟောင်ကောင်အထူးအုပ်ချုပ်ရေး ဒေသ အစိုးရ၊ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် (Independence Commission Against Corruption-ICAC) မှ ကော်မရှင်နာအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Created By : 26-Apr-2018	Published In: နိုင်ငံတကာ အစည်းအဝေး Hits: 366
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကြည်သည် ဟောင်ကောင် အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသအစိုးရ၊ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် (Independence Commission Against Corruption-ICAC)မှ ကော်မရှင်နာ Mr.Simon PEH Yun LU နှင့်အဖွဲ့အား ယနေ့နံနက်(၀၉:၃၀)နာရီတွင် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံး၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
Showing 33 to 36 of 148 (37 Pages)